Akụkọ - Iko na -ekiri ọkụ
Iko na -ekiri ọkụ
BY ADMIN NOV. Ọgọstụ 24, 2020
Iko e ji achọ mma bụ iko e ji mee ihe maka ịchọ mma, ọtụtụ n'ime ha esichala nke ọma, gụnyere embossing, frosting, paint, wdg.
Ịysụrị ọ .ụ Gilasi Dị OkirikiriA na -eji otu ebu na akụrụngwa arụ ya ka ọ bụrụ ebe dị nro, ikuku oyi na -ajụkwa ya ngwa ngwa na otu. Ndịiko dị ọkụ na -etolite nrụgide nrụgide n'elu elu, a na -etolitekwa nrụgide ime ime ime, nke na -eme ka iko ahụ ka mma. Iko ahụ nwere okpukpu anọ nke ikiri ekwe na mmetụta nke iko ahụ. Mgbe agbajiri ya, usoro azọpịa ya na nke iko enyo jụrụ oyi. Akụkụ ndị dị mma nwere ihu adịghị emerụ ahụ mmadụ.
Ya mere, a na -akpọkwa ya ụdị iko nchekwa. Usoro azọpịa ihe bụ otu ihe ahụ iko dị ọkụ. Akụkụ ndị dị mma nwere ihu adịghị emerụ ahụ mmadụ, yabụ, a na-akpọkwa ya ụdị iko nchekwa.
Ọ bụ nhọrọ zuru oke maka ndị na -atụpụta ụkpụrụ ụlọ nke ga -emerịrị koodu ụlọ ma sie ike ma sie ike maka ihe nchekwa. Nkwa na -ekwe nkwa, a ga -ekpebi ihe eji emepụta nchapụta ahụ site na ndị na -ebubata iko na China nwere ọnụ ahịa. Ọ dị na oke na nha niile na -ese n'elu mmiri, yabụ iko dị ọkụ A na -ekpebi ọnụahịa site na ọkpụrụkpụ dị iche iche.
Iko dị ọkụbụ ụdị iko a na -akwanyere ùgwù. Site na ụzọ anụ ahụ ma ọ bụ kemịkal, a na -etolite nrụgide nrụgide n'elu iko, a na -etolitekwa nrụgide n'ime. Ọ bụ ọnụnọ ụdị nrụgide igwe nwere ike ịhazi microcrack gbasaa nke ọma na enyo enyo, ka iko dị ọkụ nwere elu n'ibu ike, ezi kwes kwụsie ike na nchekwa arụmọrụ.
Iko Ọysụ a maara dị ka otu n'ime ndị na-emepụta iko na ọkachamara na China maka ngwaahịa ya dị elu yana ezigbo ọrụ. Ngwaahịa anyị bụ isi gụnyere iko dị ọkụ, laminated iko, gwara mmanụ iko, iko oyi kpọnwụrụ akpọnwụ, iko anyanwụ, wdg......
Oge nzipu: Nov-24-2020